हामीलाई तानातान होइन मालिस गर्दैछन्
मुख्य पृष्ठअन्तर्वार्ता प्रदेश १ राजनीतिहामीलाई तानातान होइन मालिस गर्दैछन्
मालिस गर्ने कसैले तोरीको तेल लिएर आउँछन्, कसैले नवरत्न तेल लिएर आउँछन्
प्रमुख सचेतक, प्रदेश १ नेपाली काङ्ग्रेस
मुख्यमन्त्रीज्यूले काङ्ग्रेसको भरोसा गरेर अविश्वासको सामना गर्नुभयो भने अविश्वासको प्रस्ताव हाल्नेले पनि प्रस्ताव पास हुन्छ भनेर काङ्ग्रेसकै भरोसा गर्नु भएको छ । हामीले अहिले कसको पक्ष लाग्छौँ, के लाग्छौँ, थाहा छैन । एकदम ‘माइन्ड’ गर्नु है मेरो ल्याङ्ग्वेजको सारलाई । उहाँहरूले एउटा कुरा भन्न छुटाउनु भएको छ ।
दुवै पक्षले पत्रकार सम्मेलन राखी–राखी नेकपाकै सरकार गठन गर्ने भन्नु भएको छ । त्यसकारण उहाँहरूको लिङ्ग जात छुट्टिएको छैन । उहाँहरू कुन पार्टी हो । को नेकपा हो ? को होइन ? अहिलेसम्म हामीलाई त्यहीँ भर छैन । त्यसकारण स्वाट्टै यसलाई समर्थन गर्छौँ, भनेर भन्छौँ । त्यो त टुक्रा न हो । कुन टुक्रा हो । के टुक्रा हो ? अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन ।
हाम्रो नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै छ । नेकपाको अकर्मण्यताको कारण मुलुक सङ्कटमा फस्यो । संवैधानिक सङ्कटमा, संसद्को सङ्कटमा, जन सङ्कटमा र रण सङ्कट सबै सङ्कट अहिले नेकपाले गर्दा फसेको हो । माधव नेपाल भन्नुस्, कि केपी ओली भन्नुस् या प्रचण्ड भन्नुस् सबैलाई हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो एउटै छ । त्यसकारण अहिले हामी कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरामा पुगेका छैनौँ । पहिले त उहाँहरू आफै के गर्नु हुन्छ भन्ने थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले यसको समर्थन गर्छौँ, उसको समर्थन गर्छौँ भनेर भयो ?
समर्थनभन्दा पनि अहिले हामी नेपाली काङ्ग्रेसकै भरमा छौँ । नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिएको जनमतमा अडिग छौँ । तपाईंहरू नै सरकारको बारेमा लुछाचुडी गर्नुहोस् हामी हेरिरहन्छौँ भन्ने हो । अब उहाँहरूले सक्दैनसकेको खण्डमा, संसद् विघटन हुने अवस्था आएको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले उचित निर्णय लिन्छ ।
तपाईंहरूले भन्दै हुनुहुन्छ नि तानातान गर्दै छन् हामीलाई भनेर । हामीलाई तानातान होइन मालिस गर्दै छन् । मालिस गर्ने कसैले तोरीको तेल लिएर आउँछन्, कसैले नवरत्न लिएर तेल आउँछन् । कसैले कुन लिएर आउँछन् । त्यो अलग छ । कसैले अविश्वासको प्रस्ताव पास गराइदेऊ तपाईं हामी मिलेर सरकार चलाऔं भन्नुहुन्छ । कसैले सरकार बचाइदेऊ तपाईं हामी मिलेर चलाऔं भन्नुहुन्छ । यस्ता सबै कुरा आइरहेका छन् । तर, यसले हामीलाई छुँदैन । राजाको पालामा त सरकारमा नगई बसेका मान्छे हौँ । यसले हामीलाई छोइरहेको छैन । यसले कहिलेसम्म छुँदैन माथिको निर्णय नआएसम्म हो । उचित व्यवस्थापनसँगै जन आकाङ्क्षा र जनभावनाअनुसार नै निर्णय हुन्छ । जन भावनालाई ‘इग्नोर’ गरेर जादैनौँ ।
हेर्नुस् सरकारको प्रतिपक्षमा रहेको दल सधैँ सरकारको प्रतीक्षामा रहेको हुन्छ । सरकार चलाउनलाई जहिले पनि तत्पर छौँ तिमीहरूले सकेनौ भने । तिमीहरूले नसक्दा त हामी नै हो नि चाहे जनतामा गएर होस् चाहे तिमीहरू खतम भएर होस् । संविधानमै लेखेको छ ।
यिनीहरू कसैले हामीले सक्दैनौँ, अब तपाईंहरूले नै चलाउने हो, जनताको अभिभारा तपाईंहरूले बोकिदिने हो । जनताको विकासको इच्छा हामीले पूरा गर्न सकेनौँ भनेपछि काङ्ग्रेसले सक्दैनौ भन्न पाइयो त ? काग्रेस जनताको लागि हो । जनताको अभिमत सदर गर्नको लागि हो । जनआकाङ्क्षा पूरा गर्नको लागि हो । त्यसकारण त्यसमा त काङ्ग्रेसले त पछाडि सर्छु भन्नै मिलेन नि !
हामी अहिले जनताले दिएको अभिमतले प्रतिपक्षमा छौँ । त्यसकारण अहिले हामीले त्यसको विरुद्धमा अभ्यास गरेका छैनौँ । अब कोही नसक्ने भयौ । घस्रिनै नसक्ने अवस्थामा पुग्यौ बाबा भने भने त्यतिबेला हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
(प्रदेश १ मा वर्तमान राजनीतिले सिर्जना गरेको अवस्थामा केन्द्रित रहेर नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीसँग कोशी अनलाइनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)